विप्लवलाई प्रचण्डको सुझाव– महेन्द्रको नक्कल गर्दा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्नुपर्यो, अरुको नक्कल गरेर पास भइँदैन, यो ०५२ साल होइन - VOICE OF NEPAL
विप्लवलाई प्रचण्डको सुझाव– महेन्द्रको नक्कल गर्दा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्नुपर्यो, अरुको नक्कल गरेर पास भइँदैन, यो ०५२ साल होइन
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०९:५३ 217 ??? ???????
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नक्कल नगर्न विप्लवलाई सुझाव दिएका छन्।
पेरिसडाँडामा बिहीबार आयोजित ‘सहिद तथा बेपत्ता परिवार अभिनन्दन कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कतिपय साथीहरुले अहिले आफ्नो नक्कल गर्न खोजेको भए पनि त्यस्तो नक्कलले दुःख पाउनु शिवाय अरु केही नहुने बताए।
‘मैले हेर्दा उनीहरुलाई मेरो स्कुलको नक्कल गर्न खोजेको बाहेक अरु केही देख्दिनँ’, प्रचण्डले भने, ‘तर नक्कल गरेर पास भइँदैन। सक्कल गरेर मात्रै पास हुने हो।’
प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रको कदमलाई पनि ‘महेन्द्रको कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गर्न खोजेकोले सफल नहुने’ भनेको स्मरण गरे। ‘महेन्द्रले आफ्नो जमानामा जे गरे, अर्कोले षडयन्त्रपूर्वक आएर म पनि त्यही गरेर देखाउँछु भन्यो भने त्यो सफल हुने कुरा होइन। त्यो कलाविहीन नौटंकीमात्रै हुन्छ भनेको थिएँ। त्यस्तै भयो’, प्रचण्डले भने, ‘अहिले पनि साथीहरुले जसरी गर्न खोज्नुभएको छ। यो ०५२ साल होइन। अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन। अहिले नेपालमा महिला, दलित, जनजाति सबैका लागि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको व्यवस्था छ।’
उनले हिजो सँगै लडेका साथीहरुको सरकार भएको पनि स्मरण गराए। ‘परिस्थिति हेर्नुपर्दैन’, उनले प्रश्न गरे।
‘कतिपयलाई प्रचण्डले यस्तो गर्‍यो। यो भयो। अब म अर्को प्रचण्ड बन्छु भनेर भन्दै हिँडेको पनि सुनेको छु। सजिलो छैन प्रचण्ड बन्न पनि। कसैले चाहेर भइहाल्ने होइन। म पनि प्रचण्ड बन्छु भनेर हिँडेको थिइनँ। जनताको काम गर्छु भनेर हिँड्दाहिँड्दै जनताले मलाई प्रचण्ड बनाइदियो। अब फेरि त्यही समयमा अर्को प्रचण्ड बन्दैन’, उनले भने।
उनले प्रचण्ड बन्न खोज्नेहरुलाई नयाँ बाटो खोज्न सुझाए। ‘प्रचण्डकै नक्कल गरेर प्रचण्ड बन्न खोज्नु भ्रम हो’, उनले भने, ‘भ्रमले कहीँ पनि पुगिँदैन। दुर्भाग्यपूर्ण परिणाममा मात्रै पुग्छ।’
प्रचण्डले विप्लवले मार्नुपर्ने सूचीमा आफूलाई एक नै एक नम्बरमा राखेर माइन्युट गरेको र टिम पनि खटाएको जानकारी सरकारबाट पाएको बताए। ‘मलाई ती साथीहरु सम्झिँदा दया माया लागेको छ’, उनले थपे, ‘के भएको होला साथीहरुलाई? मलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो परिवर्तन बच्ने हो त?’
नेपाल अब हिंसातर्फ फर्किँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
संसारका सबै बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनी घुम्न आउन राष्ट्रपति भण्डारीको निम्तो
खुमलटारको जग्गा बेचेर रेडियो नेपाललाई खर्च !
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को निरन्तरता कि परिमार्जन भन्नेबारे नेकपामा दुई धार !
सडकमा पत्रकार , मिडिया विधेयकको विरोध
मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउने प्रक्रिया सुरू भएको छ : गृहमन्त्री
आज मदन–आश्रित स्मृति दिवस, नेकपाले विविध कार्यक्रम गरेर सम्झँदै
एकता भएकाे एक वर्षपछि नेकपाले टुंग्यायो जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व, आज घोषणा हुँदै